Ny herin'ny ALT sy ny TAB | Martech Zone
Alakamisy 25 martsa 2010 Alatsinainy Janoary 1, 2018 Robby Slaughter
Raha ny teknolojia momba ny solosaina no resahina dia gaga aho hoe firy ny olona tsy mahalala tsara an'ireo bokotra roa manan-danja indrindra amin'ny klavinao. Ny herin'ny ALT sy ny TAB mahatalanjona dia misy ny sasany amin'ireo torohevitra manan-danja indrindra ho an'ny olona rehetra izay mampiasa solosaina hampiroborobo na hitarika ny orinasany. Raha atao teny hafa: saika ny rehetra izao mamaky an'i Martech!
Ny faritra hafa
Mba tena hahatakarana ny fitambarana ALT + TAB dia mila manomboka amin'ny fifanakalozan-kevitra momba ny lakilen'ny ALT isika. Fantatrao angamba fa ny "ALT" dia fohy amin'ny "alternate." Midika izany fa ity bokotra kely kely ity dia natao hanovana ny asan'ny mpampiasa ankehitriny. Ny mpamosavy amin'ny informatika dia miantso an'io fotoana io hoe "switch mode". Ny fanindriana ny fanalahidy "ALT" dia milaza amin'ny milina hitondra tena hafa tanteraka noho ny ankehitriny.
Mety ho toa tafahoatra loatra izany. Rehefa dinihina tokoa, ny lakilen'ny SHIFT dia toa mitovy amin'ny fahitana azy voalohany. Fa ny SHIFT dia manova endri-tsoratra fotsiny avy eo ambony ka hatrany ambany. Ny "A" dia mitovy amin'ny "a" amin'ny ankapobeny. Raha ny marina, ny milina fanoratana taloha dia samy nanana ny kopian'ny litera roa. Ny lakile "ALT" dia mitondra ny masinanao mankany amin'ny tontolo vaovao.
Ilay ALT tokana + TAB
Toa tsy misy na inona na inona mitranga rehefa mikapoka ALT ianao. Tsindrio ary avoahy imailaka ny lakileny ary tsy hamaly na ny milina Windows na Mac aza. Fa raha tazoninao hidina ny bokotra ALT ary avy eo manatratra sy manindry ny bokotra TAB indray mandeha monja afaka iray segondra ary avoaka io lakile TAB io dia ho hitanao fa hiseho ny varavarankely iray. Hitanisa ireo rindranasa mavitrika rehetra izy io, ary ho hitanao fa ny manaraka ao anaty lisitra dia nasongadina. Rehefa mamoaka ny ALT ianao dia hovana eo no ho eo amin'ilay programa.
Ny herin'ny ALT + TAB irery ihany dia afaka mamorona fanatsarana vokatra lehibe. Tsy mila manala ny tananao amin'ny klavier ianao ary mifindra amin'ny totozy raha te hiova eo anelanelan'ny fampiharana misokatra roa ianao. Mandehana ary andramo izao. Mandania minitra vitsy hahalalanao ny zavatra tsapan'ny ALT + TAB.
Ny roa farany
Raha mandinika akaiky ny ALT + TAB tokana ianao dia ho hitanao fa miova eo anelanelan'ny amin'izao fotoana izao fampiharana sy ny nampiasaina farany fampiharana. Midika izany fa raha mifamadika avy amin'ny hoe ianao, ny tranokalan'ny tranokalanao mankany amin'ny mpanodin-teny miaraka amin'ny ALT + TAB, afaka mifamadika ianao indray miaraka amin'ny ALT + TAB hafa. Ireo rehetra miverina mandroso ireo dia mety ho toa fandaniam-potoana fotsiny, saingy izao marina izay ataontsika rehetra rehefa manao fikarohana sy manoratra. ALT + TAB dia mety tsara amin'ny workflow isan'andro.
Mamonjy segondra vitsy manetsika ny tananao miverina miverina amin'ny totozy dia toa tsy dia be loatra. Ampitomboy izany switch switch an-jatony isan'ora. Hevero fa very fotoana fohy ny fifantohanao rehefa tsy maintsy mahita ny totozy miaraka amin'ny fahitana peripheral ianao ary misintona ny cursor midina any ambanin'ny efijery sy miverina. Ny fifehezana ny ALT + TAB tokana dia hanova tanteraka ny vokatrao.
Betsaka lavitra noho ny fotony fotsiny. Raha mikapoka ny ALT + TAB ianao nefa tazony ny bokotra ALT dia ho hitanao ny sary masina rehetra an'ny rindranasa mavitrika. Azonao atao ny mampiasa presses miverimberina an'ny lakile TAB hanodinana ireo fandaharana nampiasanao taloha. Ny fitambaran'ny SHIFT + TAB dia mandeha amin'ny lalana mifanohitra amin'izany.
Raha sendra sendra nandika ny angon-drakitrao amin'ny programa iray mankany amin'ny iray hafa ianao miaraka amin'ny tsindry bokotra, ALT + TAB dia afaka manao ny zavatra niainanao ho iray amin'ny fampiasana ihany ny fitendry. Izany dia mety hiteraka fanatsarana vokatra lehibe.
Makà fotoana kely hianarana ALT + TAB. Ho haingana kokoa amin'ny masinina ianao ary ho afaka hamita asa bebe kokoa. Fa ny tena zava-dehibe dia ekeo fa ny lakile toa ny ALT dia tena misy manova ny maody amin'ireo rafitra manodidina antsika. Ny ALT dia toy ny mahasamihafa ny miasa eo amin'ny latabatrao sy ny miresaka an-telefaona. Momba ny famindrana amin'ny fanjakana hafa.
Ny fanovana fifanakalozan-kevitra no vidiny lehibe indrindra amin'ny famokarana. Ny fahatapahana rehetra dia manome ny fotoana hanadinoanao izay nataonao. Jereo hoe inona no ataonao ka mila manova ny fifantohanao ianao, na dia avy amin'ny klavie mankany amin'ny totozy aza izany. Ho hitanao fa mihamalemy kokoa ny fikoriananao ary ho vitanao bebe kokoa.
Tags: alt tagmilina fanoratana
Tena manisa ve ny isa mpanaraka be?
Mar 25, 2010 ao amin'ny 4: PM PM
Nisy mpiara-miasa iray niantso ahy hoe 'totozy kilemaina' satria nampiasa ny interface interface graphique foana aho hivezivezena. Naharitra taona vitsivitsy talohan'ny nahitako ny fahombiazan'ny hitsin-dalana manan-danja. Mahaliana tokoa, mino aho fa ny mpampiasa Mac dia 'novalian-tsoa' tamin'ny fanalahidy fanalahidy nahavita zavatra lehibe. Nahita Windows - fa ny ankamaroan'ny namako amin'ny Mac dia mahafinaritra amin'ny fahafantarana ny hitsin-dàlana rehetra… ary asehon'ny vokatr'izy ireo!
16 Nov 2012 amin'ny 6:03 maraina
Lahatsoratra lehibe fantatro tamin'io fa mpampiasa pc tsy manam-pahalalana aho